Mxhasi oThandekayo Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 14, 2007 NgoMvulo, Septemba 24, 2012 Douglas Karr
Ndiqinisekile wonke umntu unolunye lwezi ntlobo zabathengi. Ndisikelelwe ngokwenene kule minyaka ilishumi idlulileyo ndibenabaxhasi abonwabileyo ukusebenza nam. Ndibonile ukuba ezinye iinkampani zibaphatha njani abathengi bazo kwaye ndiyayithiya. Ndisoloko ndijolise kwinqanaba eliphezulu lenkonzo. Ndithembise ngaphezulu kwaye ndihambise ngaphezulu. Kodwa, geesh… lowo mthengi… ukuba ndingababhalela ileta kuphela…
Emuva xa usikhethile njengomthengisi wakho, ubuze imibuzo emininzi kwaye wasirhuqa ngokungenanceba kwiikhilomitha zerape ebomvu ngaphambili nina Ndagqiba kwelokuba siyimveliso efanelekileyo kuwe. Ngoku ukuba usikhethile, ayizizo iziphoso zethu ukuba ngoku awonwabanga zezona zinto zisebenzayo kunye nokusebenza esikubonise kona kwaye wakuthanda. Khange sixoke. Khange sithethe gwenxa. Nguwe otshintshe ingqondo.
Siza kuqhubeka nokuzingca ngokuba sidibene ne-100% akho iimfuno kwaye zigqithile kuzo zonke akho imihla ebekiweyo. Eso yayisisithembiso esasenza kuwe kwaye sasigcina.
Ngaphandle kwento onokukholelwa kuyo, ingqwalaselo yethu ayikukutshabalalisa ishishini lakho. Injongo yethu kukuqhubeka nokuphuhlisa ezona zisombululo zibalaseleyo emhlabeni. Siyazi ukuba siyabadlula bonke abanye abathengisi kwiimpawu, ukungaguquguquki, ukusetyenziswa, kwaye sinezinto ezininzi ezibonisa imeko yokungxamiseka kunayo nayiphi na enye inkampani.
Ngelixa abo sikhuphisana nabo bengazivezi i-imeyile okanye iinombolo zefowuni kuwe, siye sazisa ngamnye wabasebenzi bakho ngokobuqu, ukubonelela ngolwazi lwethu olupheleleyo, kwaye banenkxaso yobuqu engama-24/7 Injongo yoku ayikokubonelela ngento yokuba usithobe, ikhona kuba sikhathalele wena, inkampani yakho kunye nabathengi bakho.
Wonke umthengi yeyona nto iphambili kuthi # 1. Ngelixa oko kunokubonakala kungamkelekanga ukuba uchitha imali eninzi kunye nathi, uyakuyivuyela into yokuba abanye bachithe imali eninzi kakhulu kunathi.
Sisoloko sivavanya imeko ezikwishishini, itekhnoloji, kunye nesiseko sabathengi ukuze unganyanzelekanga. Oku kusibonelela ngemibono yeqhinga kunye nemveliso esele isemva kweempawu kunye nophuculo oluhamba ngaphaya konyaka olandelayo. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, asihlali esofeni kudlala iWorld Warcraft kwaye silinde isikhalazo esilandelayo. Siyasebenza, siyatyala, kwaye sivelisa uphuculo yonke imihla. Sineshedyuli yomsebenzi wethu endaweni. Ibango lakho lokukhululwa kwangoko kwenqaku elitsha lineziphumo kwizicwangciso esele sisebenza kuzo kunye neenjongo esinazo. Qaphela ukuba siyakwenza konke okusemandleni ethu ukubeka iimfuno zakho phambi kwabanye - kodwa kuyakuthatha ixesha ukulungelelanisa iishedyuli, iinjongo kunye nolindelo lomntu wonke okwintlangano yethu.
Ukumemeza ngento eza kugqitywa izolo ngekhe kuphucule umgangatho kunye nokuthembeka kwento leyo. Sineenkqubo, ukuvavanya, kunye nokuqinisekiswa komgangatho kwindawo yakho ukhuselo, hayi eyethu.
Ukuba, ngalo lonke ixesha sikubiza, eyona njongo yakho kukusithuka nokusithoba - asizukuphuma kwindlela yethu sikubize kwaye sikuncede uphucule iziphumo zeshishini lakho. Asinakufunda kuwe ukuba awusiniki thuba. Siza kuyeka ukwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda kuba sibakhathalele abasebenzi bethu ngokwaneleyo ukuba asifuni kubabona bexhatshazwa. Kungcono sichithe ixesha lethu kunye nabathengi ababuqondayo ubuchwephesha obutyalile kubo kwaye banqwenela ukusebenza kunye nathi kusukelo olunye.
Ishishini lethu alikhuli kangangezihlandlo ezilishumi ngaphezulu konyaka ngenxa yokuba singenanto kwaye singayiqondi into esiyenzayo. Sitshintsha ishishini kwaye samkelwe ngenxa yalo. Utshintsho lufuna uthando, izixhobo kunye nexesha. Yiba nomonde kuthi kwaye awusoze ube nosizi. Abathengi bethu banokusebenza nathi okanye bangalwa nathi, ucinga ukuba ngubani oza kuxhamla ngakumbi?
Ukugcina abasebenzi bakho bonwabile kuye kwangqinwa kuphucula ukuthembeka kwabo kunye nemveliso. Ngaba ucinga ukuba yahlukile kumthengisi wakho wesicelo?
Umthengisi Ubukrelekrele ngokwaneleyo ukuba unokukhetha
tags: Apiisixhobo sokukhumbuzaisinxulumanisi senkqubo yekhompyuthab2cgamificationjsonulawulo lwegamakuphumlaisephaukwahlula uvavanyouvavanyoIngxelo yomsebenzisiiphonepress yamagamaIapps usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindowsXML
Ukuhlala kwaMandla: Uya kuhlala ixesha elingakanani?
Ukufana kunye neNgwe: Kufuneka ubenayo kuMsebenzisi we-Mac yeMashishini
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2007 ngo-7: 28 PM
Ndiyayithanda. Ndingaphindaphinda amagama emihlathi yokuqala into enje:
“Emuva xa wawusikhetha njengomthengisi wakho, ubuze imibuzo emininzi kwaye wasirhuqa ngokungenanceba kwiikhilomitha zekhasethi ebomvu, wasenza ukuba sidwelise ngokweenkcukacha uxanduva lwethu hayi de ube unengxelo epheleleyo yomsebenzi ovumeleneyo ukuba uwenzile. uthatha isigqibo sokuba sisisombululo esifanelekileyo kuwe.
Ngoku ukuba usikhethile, ayizizo iziphoso zethu ukuba iingxaki zeshishini lakho zitshintshile kwaye ngoku awonwabanga zezona zinto kunye nemisebenzi ebesivumelene ngayo ukuba ingasombulula iingxaki njengoko ubuzichazile ngelo xesha. Khange sixoke. Khange sichaze gwenxa. Iimeko zakho kunye nemeko-bume itshintshile.
Ngoku njengeqela kufuneka siphinde siqokelele kwaye kufuneka sigxile
Ungasiphucula njani isisombululo esikhawulezileyo kwiingxaki zeshishini ezitshintshiweyo …………………
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2007 ngo-9: 05 PM
Ndonwabile ukuba uyiposile inguqulelo ye-PG-13. haha. Ndingathanda ukuthumela ishumi elinambalwa loku koku kwabanye abathengi. Ngaba oku kuphantsi kwelayisensi yokuyila? Inqaku elihle.
Ngomhla wama-16 ku-Disemba 2007 ngo-2: 04 AM
Gosh, konke kubonakala kuyinyani. Uphantse wangathi uhlala nje kuloo fowuni… '-)
Ngomhla wama-16 ku-Disemba 2007 ngo-10: 14 AM
Ii-imeyile ngokwenene zikwisatifiketi ngokunjalo! 🙂
Ngomhla wama-16 ku-Disemba 2007 ngo-6: 03 AM
Ewe, bendinabaxhasi abangonwabanga xa ndiphinda-phinda ukugcwala kwabo kunye nentengiso… kamva ke ndikuxelele ukuba bayayazi inkampani evela eIndiya ebonelela nge-1000000 yeendwendwe zemihla ngemihla nge $ 25
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2007 ngo-8: 59 AM
Yiyekele ku-Ade ukubeka le nto kwindawo elula, etyebileyo yekhowudi kwi I-Pseudocoded!